IMotorola izakwazisa itshaja engenazingcingo kwintengiso | I-Androidsis
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwenza isifotho kwimakethi ye-Android. Iimpawu ngakumbi nangakumbi zisungula iifowuni zazo ezihambelana nolu hlobo lwentlawulo. Kule nto, ufuna itshaja ekhethekileyo kuyo, ke inani leetshaja ezingenazingcingo kwintengiso ziyonyuka. IMotorola ngoku ijoyina olu luhlu, njengoko ifemu isandula ukubhalisa itshaja yokuqala engenazingcingo.
Oku kukodwa, ngelixa kunomdla, ngekhe kubetheke kakhulu, ukuba siyakuqonda oko Akukho fowuni kwikhathalogu ye-Motorola exhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Oko kuphakamisa ukuba ifemu izakuqalisa kungekudala ifowuni leyo.
Ishaja ekuthethwa ngayo ukuba inkampani ibhalisile yiMoto Qi, ongayibona kumfanekiso ongezantsi. Yitshaja yamandla ye-10W, kunye nefomathi kunye noyilo oluqhelekileyo kolu hlobo lweeshaja. Ngokwenene ijongeka njengetshaja yeXiaomi, esiye sahlalutya ngaphambili.
Ngelixa i-Motorola ibhalise ngokusemthethweni le tshaja ingenazingcingoOkwangoku asinayo idatha ngomhla oza kuphehlelelwa ngayo kwintengiso. Kucingelwa ukuba inkampani iya kuphehlelela umnxeba ngenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo ekuqaleni konyaka olandelayo, ke ngoko itshaja iyakufika ngesixhobo.
Olunye uqikelelo luthi iya kuba yi-Moto G7 ifowuni eya kuba nenkxaso kolu hlobo lwentlawulo. Kodwa okwangoku yinto engekaqinisekiswa. Ke sinethemba lokwazi okungakumbi ngesi sixhobo seMotorola esiya kumelana nalo mthwalo. Ngokuqinisekileyo phambi kokuphela konyaka siya kwazi ngakumbi.
Into ecacileyo yile Iimpawu kwi-Android zamkela ukutshaja ngaphandle kwamacingo, kumanqanaba angakumbi nangaphezulu. Siza kujonga kwifowuni yeMotorola eya kuhamba nale tshaja.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IMotorola ibhalisa itshaja yokuqala engenazingcingo